Markaad Daadineyso Goob Cusub: Cabir Labo Jeer, Goor Mar | Martech Zone
Markaad Dhigeyso Goob Cusub: Cabir Labo Jeer, Goor Hal Goyn
Jimco, Abriil 16, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Suuqgeyaasha Online-ka ah waxay inta badan horumariyaan istiraatiijiyaddooda websaydhka cusub ee ay qaabeeyeen iyagoo waqtiga oo dhan ku bixinaya naqshadeynta ka dibna geynaya barta cusub… ka dibna cabbiraya natiijooyinka isbeddelka. Waan xirxirayaa markaan arko shirkadaha qaar oo geeya mareego dhowr bilood gudahood ah midba midka kale maxaa yeelay mid walba “ma uusan shaqeyn”.
Kahor intaadan bilaabin inaad xitaa qorsheyso naqshadaha goobta cusub, waxaad u baahan tahay inaad si buuxda u ogaatid halka bartaada hadda laga aasaasay. Dhigista boggag cusub marba marka ka dambeysa waxay la mid tahay bilaabida maaratoon marar badan. Kama tilaabsan doontid waqtiga aad lumisay, waxaad gadaal ka riixaysaa dib u soo celinta maalgashiga.
Hadaadan haysan Analytics si buuxda u hawlgaliyay oo u cabbiraya dhinac kasta iyo weligiis ee bartaada, qaado waqti aad si habboon u dejiso hadda - boggaaga hadda. Waxay umuuqataa doqonimo inaad waqti kubixiso fulinta Analytics si qumman goobta aad qashin u doonaneyso, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fahanto sida dadku ugu soo socdeen goobtaada, marinka bartaada, iyo u beddelashada bartaada hore ka hor intaadan qaabeynin bartaada cusub.
Sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh uga feejignaato waxa bogagga ay hadda si wanaagsan ugu kala sarreeyaan ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Adeegsiga aalad sida Xeebaha, waad tilmaami kartaa bogagga aad horayba uxustay iyo in sifiican ay ugujiraan matoorada raadinta. Marar badan ayay suuqleydu dejiyaan goob cusub oo ay ku kala sarreeyaan iyo waddooyinka gebi ahaanba la beddelay. Ma wanaagsan.
Raadinta ka sokow, tixraacaya bogagga iyo bogagga aad ayey muhiim u yihiin. Haddii boggag kale ay kuu soo gudbiyeen taraafikada, ama bogaggaaga lagu calaamadeeyay baraha bulshada… ma doonaysid taraafikadaas inay ku dhammaato bog 404 ah. Samee qorshe dib u habeyn ah oo laga soo qaado bogaggaagii hore ee taraafikada u ahaa bogaggaaga cusub - oo hubi in waxyaabaha ku jira ay iswaafajinayaan.
Marka la soo koobo, laba jeer cabir oo mar jar. Ku cabir bartaada hore si wax ku ool ah adoo maraya Analytics, darajooyinka mashiinka raadinta iyo gadaal isku xidhka. U dir goobtaada cusub si aad uga faa'iideysato taraafikada hadda jira iyo maamulka aad horay u dhistay, ka dibna markaa, dejiso goobta cusub.
Tags: design webwebsite